Hagay – 2trondro
Home / Baiboly / Testamenta Taloha / Hagay
1:1 Tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariosa mpanjaka, tamin'ny fahenim-bolana, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana, ny tenin'i Jehovah tonga, ka nampilazainy an'i Hagay mpaminany, tamin'i Zerobabela, zanak'i Sealtiela, governora any Joda, sy amin'i Jesosy, zanak'i Jozadaka, ny mpisoronabe, nanao hoe::
1:2 Izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro,, nanao hoe:: Ity firenena ity milaza fa ny fotoana tsy mbola tonga mba hanorenana ny tranon'i Jehovah.
1:3 Fa ny tenin'i Jehovah tonga 'ny tanan' ny mpaminany Hagay, nanao hoe::
1:4 Moa andro ho anao ny hitoetra ao Hopetahana trano, raha ity trano ity nandao?
1:5 Ary ankehitriny, izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro,: Alatsaho ao am-ponareo eo ny lalanareo.
1:6 Namafy be ianareo, ary nitondra kely. Ianao ritra ary tsy afa-po. Ianao nisotro ka tsy mbola mamo. Nanarona ny tenanareo ianareo ary tsy faly. Ary na iza na iza nanangona karama, efa nataony tao an-kitapo loaka.
1:7 Izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro,: Alatsaho ao am-ponareo eo ny lalanareo.
1:8 Niakatra any an-tendrombohitra, makà hazo, ary ataovy ny trano, ary izany dia ho azo ekena ho ahy, dia ho voninahitra, hoy Jehovah.
1:9 Efa nijery bebe kokoa, ary indro, dia lasa tsy, ary nitondra azy an-trano, ary nitsoka koa izy. Inona no anton 'izao, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,? Izany dia satria ny trano efa lao, kanefa Hianao efa haingana, samy ho any an-tranony.
1:10 Noho io, ny lanitra anareo efa voarara manome ando, ary ny tany efa voarara avy nanome ny tsimoka.
1:11 Ary niantso ny fahamainana ny tany, ary ny tonian'ny ny tendrombohitra, ary ny vary, ary ny tonian'ny divay, ary ny tonian'ny diloilo, ary na inona na inona ny tany dia miteraka, sy ny olona, ary ny biby mpitondra entana, sy ny rehetra ny asa-tanana.
1:12 Ary Zerobabela, zanak'i Sealtiela, ary i Jesoa, zanak'i Jozadaka, ny mpisoronabe, ary ny sisa amin'ny olona nihaino ny feon 'ny Tompo Andriamaniny, sy ny tenin'i Hagay mpaminany, araka ny Tompo Andriamaniny naniraka azy holazaina aminy. Ary ny olona saro-tahotra eo anatrehan'ny tavan'ny Tompo.
1:13 ary Hagay, ny anjelin'ny Tompo eo iraky ny Tompo, niteny tamin'ny olona, nanao hoe:: Hoy ny Tompo, "Izaho no momba anareo."
1:14 Dia notairin'i Jehovah ny fanahin'i Zerobabela, zanak'i Sealtiela, governora any Joda, ary ny Fanahin'i Jesosy, zanak'i Jozadaka, ny mpisoronabe, ary ny fanahin'ny sisa rehetra amin'ny vahoaka. Dia niditra izy ka nanao ny asa ao an-tranon'i Jehovah, Tompon'ny maro, Andriamaniny,
2:1 tamin'ny andro fahefatra amby roa-polo tamin'ny volana, tamin'ny fahenim-bolana, tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariosa mpanjaka.
2:2 Ary tamin'ny volana fahafito, tamin'ny amby roa-polo tamin'ny volana voalohany, ny tenin'i Jehovah tonga, ka nampilazainy an'i Hagay mpaminany, nanao hoe::
2:3 Lazao amin'i Zerobabela, zanak'i Sealtiela, ny governora any Joda, sy amin'i Jesosy, zanak'i Jozadaka, ny mpisoronabe, ary ny sisa amin'ny olona, nanao hoe::
2:4 Iza no mbola sisa aminareo,, izay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha? Ary ahoana no hahita izany ankehitriny? Tsy, raha oharina amin'ny izay, toy ny tsinontsinona eo imasonareo ity?
2:5 Ary ankehitriny ho hery, Zerobabela, hoy Jehovah. Ary ho hery, I Jesoa, zanak'i Jozadaka, ny mpisoronabe. Ary ho hery, ny olona rehetra amin'ny tany, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,. Fa Izaho momba anao, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
2:6 Ary hanao zavatra araka ny teny izay namboly taminareo, fony ianao niala avy tany amin'ny tany Egypta. Ary ny Fanahiko dia ho eo aminareo. Aza matahotra.
2:7 Fa izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro,: Misy fotoana fohy mbola iray, ary Izaho kosa hifindra lanitra sy ny tany, ary ny ranomasina sy ny tany maina.
2:8 Ary hataoko hifindra ny firenena rehetra. Ary ny nangataka ny firenena rehetra dia tonga. Ary hofenoiko voninahitra ity trano ity, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
2:9 Ahy ny volafotsy no, sy ny ahy dia ny volamena, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
2:10 Ho lehibe ny voninahitr'ity trano ity, ny farany, maro noho ny teo, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,. Ary eto amin'ity toerana ity, No hanome fiadanana, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.
2:11 Ary tamin'ny fahefatra amby roa-polo tamin'ny volana fahasivy, tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariosa mpanjaka, ny tenin'i Jehovah tonga tamin'i Hagay mpaminany, nanao hoe::
2:12 Izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro,: ny mpisorona manontany ny lalàna, nanao hoe::
2:13 Raha misy olona dia efa nitondra masina nofo ao amin'ny paosy-dambany, ary ny tampony dia mikasika ny mofo, na appetizer, na ny divay, na menaka, na izay mety ho fihinana, tahaka izany no hohamasinina? Fa ny mpisorona namaly tamin'ny hoe:, "Tsia"
2:14 Ary hoy Hagay, "Raha ny nihosinkosina teo amin'ny fanahy dia efa nikasika izany rehetra izany, , no hataonao voaloto?"Ary ny mpisorona namaly ka nanao hoe:, "Dia ho voaloto."
2:15 Dia namaly Hagay dia hoy izy:: Toy izany ity firenena, ary toy izany ity firenena ity eo anatrehako, hoy Jehovah, ary izany dia ny asa rehetra ny tanany. Ary toy izany koa izay rehetra efa tao no namonoany efa voaloto.
2:16 Ary ankehitriny, mandinika ao am-ponareo, hatramin'izao andro anio izao ary any an-dafin'i, alohan'ny vato dia azo apetraka eo vato tao amin'ny tempolin'i Jehovah:
2:17 rehefa nanatona ny antontan-roa-polo fepetra, ka tonga folo, ary niditra ny mpanao gazety, hanohy avy dimam-polo tavoahangy, ka tonga roa-polo,
2:18 Ahoana no namelezako anareo tamin'ny mirehitra rivotra, ary ny maty fotsy, ary ny havandra, rehetra ny asan'ny tananao, nefa tsy nisy olona eo aminareo izay niverina tamiko, hoy Jehovah.
2:19 Alatsaho ao am-ponareo hatramin'izao andro anio izao sy ny hoavy, avy amin'ny amby roa-polo andro fahefatra tamin'ny volana fahasivy, hatramin'ny andro izay ny fototry ny tempolin'ny Tompo no tononina, ary apetraho eo amin'ny fonao.
2:20 Efa ny voa no germinated mbola? Ary manana ny voaloboka, ary ny aviavy, ary ny ampongabendanitra, ary ny hazo oliva mbola tsy Niroborobo? Hatramin'izao andro anio izao amin'ny, Izaho hitahy anao.
2:21 Ary ny tenin'i Jehovah tonga fanindroany tamin'i Hagay, ny fahefatra amby roa-polo tamin'ny volana, nanao hoe::
2:22 Lazao amin'i Zerobabela, governora any Joda, nanao hoe:: Dia mihetsika na lanitra sy ny tany.
2:23 Ary Izaho kosa mahasimba ny seza fiandrianan'ny fanjakana, ary Izaho kosa hanorotoro ny herin'ny fanjakan'ny jentilisa. Ary Izaho mahasimba ny efatra-tsoavaly kalesy, ary ny mpitaingina azy; sy ny soavaly sy ny mpitaingina ho entina nidina, ny lehilahy amin'ny sabatra ny rahalahiny.
2:24 Amin'izany andro izany, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,, Izaho dia handray anareo, Zerobabela, zanak'i Sealtiela, mpanompoko, hoy Jehovah, ka hamboleko anareo tahaka ny tombo-kase, fa efa nifidy anao, hoy Jehovah, Tompon'ny maro,.